Joollee qacalee lammiin oomishatte -
Jajjaboo sabaa tan eebbaan guddatte
Humna haarawaan garayyuu onnattee
Durat deemaa jirti gurmuun wal jaartee.
Dhaloonni qubee tan sodaa hin qabne
Fuul dura malee duubatti tan yaane
Hanga galii gartuu takka tan hifanne
Humna haarawa kishifii hin qabne
Qubee Generation jajjabaadhaa janne!
Isiniin boonnee nu gammachiiftanii
Jalqaba keessaniin guddoo hoojjattanii
Abdii saba bal’aa daawwitiin isinii
Jabaadhaa jabaadhaa! Gadaatu keessanii.
Jara if tuultu tan isinitti hinaaftu
Tan komattu, tan isin dura dhaabbattu
Karooraa fi kaayyoo warra faalleessitu
Gufuu fi hinaaftuu tan dubbii xibaartu,
Laagaatti arrabni irraa haa citu!
Biqilan xoolooyne xurree dammaqinaa
Jajjabaadhaa jannee isin jala yaanaa
Tanarraa gammannee hundinuu wal faanaa
Ammallee jabaadhaa nu isiniin boonnaa!!
Previous Galmee Seenaa Irraa: Moggaasa maqoota gandoota fii magaaloota Oromiyaa Isa ganama…
Next Gumaan Gootowwan Wareegamanii Walabummaa Oromiyaatiin Deebi’a.